UAlexei Vorobyev, iindaba zakutshanje zanamhlanje - kunye no-Bachelor 4 odibana naye
U-Julia Volkova ubonakalise imfihlelo ye "Bach" uAlexei Vorobyov
Nangona iprojekthi yokuba "i-Bachelor" kunye no-Alexei Vorobyov iphelile iintsuku ezilishumi edlulileyo kwaye ukukhishwa kwabadlali "Bach-5" sele sele iqalile, ababukeli basasaxhala malunga nombuzo - kunye no-Alexei Vorobyov odibana naye emva kwe "Bach".
Akukho zizathu zobudlelwane nomnye wamantombazana athatha inxaxheba kwi-show e-Alexandra Vorobyova ayizange ifunyanwe. Kwiphepha lika-Yana Anosova, uNatalika Gorozhanova, uNatalika Tkalina okanye u-Alla Berger, akukho zibonakaliso malunga nobudlelwane bamantombazana kunye no-Alexei Vorobyov emva kwe "Bach". Umdlali uziphatha njengokungathi akukho nto eyenzekayo - wayexhomekeke kwiihotele, ukurekhoda iitshitshi ezitsha, ukwenza izicatshulwa ... Neendaba zakutsha malunga nobomi buka-Vorobyov zihlala ziyimfihlakalo kubo bonke abantu.
U-Julia Volkova wanikela iingcebiso kumantombazana aphupha ngo-Alexey Vorobyov
Ngobusuku bokugqibela, uAlexei Vorobyov kwenye yeziganeko wadibana nomlingani wakhe, umculi uJulia Volkov. Kubonakala ngathi umdlali weqhawe uyazi kakuhle ukuba ama-26 amantombazana alwa neentliziyo zeAlexei kungekudala.
U-Julia wabonakalisa abalandeli bakaBach imfihlo yakhe eyintloko - ngexesha uAlexei Vorobiev engahlangabezane nabani na, intliziyo yakhe ikhululekile. I-tattoo yangaphambili yacebisa amantombazana ukuba angayishiyi:
Sekunjalo isicachelor, engabonwanga nabani na)))) Lesha, soloko evuya ukuhlangabezana! Ntombi, musa ukwehlisa izandla! Thatha inyathelo!
UKonstantin Meladze waqala ukuxelela ngencwadana enoVera Brezhneva
Emva kokufa kukaJeanne Friske, intsapho yakhe inomdla
UBenedict Cumberbatch noSophie Hunter baba ngabazali
UMaria Poroshina waba ngumama wesine
I-Network yahleka encwadini entsha ngo-Anna Sedokova
UAlexei Chadov emva kwekhefu kunye no-Ditkovskite wathuthela kumntakwabo
UFedor Bondarchuk wabonakala kuqala kwikhephethi ebomvu kunye noPaulina Andreeva, umfanekiso
Ndingaphi na ukuba ndibeke i-aquarium kwi-feng shui
I-recipe epholileyo: i-chocolate carrot "Ihlathi leMnyama"
Imilinganiselo emihle kubantu abafundelekileyo
Ukukhetha igama elihle lomntwana wakho
Umtshato kwisimo selizwe
Colic kwisisu somntwana osandula
UNicita Presnyakov wamangaliswa ngeembonakaliso malunga nentsha "patsan"
Umfazi wamanje onendima yomntu
Umlenze weWundlu ngesardadi kunye nobusi
Ngaba kunokwenzeka ukunyanga amazinyo nge-anesthesia ngexesha lokukhulelwa?